Mbadamba | Martech Zone
Taa bụ ụbọchị ncheta na United States. Memorialbọchị Ncheta bụ ụbọchị ebe anyị na-ekwupụta ndị kwụrụ ụgwọ kachasị maka anyị. Sọpụrụ ndị anyị nwụrụ anwụ abụghị nkwupụta nke agha, kama, ọ na-asọpụrụ ndị na-alaghachikwuteghị ndị enyi na ezinụlọ ha.
Ọtụtụ ndị na-emegharị Daybọchị Ndị Ochie na Memorialbọchị Ncheta… ha abụọ dị iche. Bọchị ndị agha ochie na-asọpụrụ ndị agha ochie dị ndụ ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ, ndị nwere ike ịlụ ọgụ ma ọ bụ na-enweghị agha mgbe ha na-ejere obodo ha ozi. Memorialbọchị ncheta bụ maka ndị lụrụ ọgụ ma nwụọ.
Akụkọ banyere Taps
Ka akụkọ a na-aga, General Butterfield enweghị obi ụtọ na oku a na-akpọ maka ọkụ ọkụ, na-eche na oku ahụ emezighị ka ọ pụta ìhè ụbọchị ngwụcha, yana site na enyemaka nke ndị ọrụ mgba ọkụ, Oliver Willcox Norton (1839-1920), dere Taps ịsọpụrụ ụmụ nwoke ya mgbe ha nọ n'ogige Harrison's ọdịda, Virginia, na-eso agha ụbọchị asaa.
Agha ndị a mere n'oge Mgbasa Ozi Peninsular nke 1862. Oku ọhụrụ ahụ, dara n'abalị ahụ na July, 1862, n'oge na-adịghị anya gbasaa na ndị agha ndị ọzọ nke Union Army ma kọọrọ ya na ndị Confederates jikwa ya. A na-akpọ taps na-akpọ oku mgbe agha ahụ bisịrị.
Site na ebe nrụọrụ weebụ Taps Bugler.
[ọdịyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/05/taps.mp3]
Taps abụghị nke mbụ, o yikarịrị ka ọ sitere na ụdị oku yiri ya, nke a na-akpọ Tattoo, nke a na-egwu otu awa tupu ndị agha ekwesịrị ịkwụsị ụbọchị ahụ ma hie ụra. Somefọdụ ndị folks amaghị na edere okwu na Taps, ọmarịcha ọkpụkpọ oku a na-akpọ maka ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị dara ada:
Day emeela, anyanwụ agaala,
Site n'ugwu, site na ọdọ mmiri,
Site na mbara igwe.
Ihe niile dịkwa mma, zuru ike zuru ike,
Chineke dị nso.
Na-ejupụta ìhè; Ma tere aka
Na-aga ụbọchị, na kpakpando
Hapụ gị nke ọma; Hasbọchị agafeela,
Ekele na otuto, Maka ụbọchị anyị,
'N'akụkụ anyanwụ, N'akụkụ kpakpando,
Ka anyị n'aga, Nke a ka anyị ma,
Taa bụkwa ụbọchị ncheta afọ iri abụọ na ise nke Ememe Ncheta nke ndị agha Vietnam.
Prexo Alfa Preview
Mee 28, 2007 na 11: 32 AM
You hụrụ na Google nyere ndị agha laghachị ọzọ n'afọ a site na ịnyeghị akara ugo ụbọchị emume ncheta? Ha na-asọpụrụ ihe niile site na Earthbọchị Earthwa ruo Independbọchị Mwere Onwe, ma gịnị kpatara Google ji enweghị mmasị na vets otú ahụ?
Mee 29, 2007 na 11: 46 AM
Nke ahụ na-atọ ụtọ - achọpụtaghị m nke ahụ na mbụ. Enwere m olile anya na ọ bụghị ihe akwadoro. Ọ dịkarịa ala, ọkọlọtọ ọkọlọtọ America mara mma nke etinyere na ahịhịa ụfọdụ ga-adị mma. Ha kwuru na ha tinyere akara maka ụbọchị ncheta na Canada nke nwere Poppies na ya, mana ọ nweghị ihe ọ bụla ebe a.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Al Gore nọ na bọọdụ ha. Ikekwe ọ nwere ike igosi nkwado ya maka ndị dike anyị dara ada site na isoro ha nwee mkparịta ụka.